Maalinta Qaramada Midoobay: Waqtiga Dabaaldegyada iyo Nadiifinta Guriga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Maalinta Qaramada Midoobay: Waqtiga Dabaaldegyada iyo Nadiifinta Guriga
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Maanta waa Maalinta Qaramada Midoobay, waa maalin muhiim ah in la xusuusto in dunidu wada shaqayn karto.
Maalintan, Qaramada Midoobay waa inay sidoo kale abuurtaa nidaam lagu hagaajin karo musuqmaasuqa, wax-is-daba-marinta, iyo wax-qabad la'aanta gidaarada dhexdeeda.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay leedahay xusuusin saaxiibtinimo.
Maalinta Qaramada Midoobay Axadda, Oktoobar 24 -keeda waxay ku beegan tahay sannad -guuradii maalintii 1945 markii Axdiga Qaramada Midoobay dhaqan galay.
Maalinta Qaramada Midoobay, oo sanad walba la xuso, ayaa bixisa fursad aan ku kordhin karno ajandaha guud oo dib loo xaqiijiyo ujeedooyinka iyo mabaadiida Axdiga Qaramada Midoobay ee ina hagayay 76-kii sano ee la soo dhaafay.
Iyada oo adduunku si tartiib tartiib ah u bilaabayo ka soo kabashada masiibada Covid-19, aan xoojinno baaqa ah in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah oo dan u ah labada ummadood iyo dadyowga, si wada jir ah dib loogu dhiso nabadda iyo barwaaqada. , markii Axdiga la ansixiyay Shiinaha, Faransiiska, Midowga Soofiyeeti, Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka iyo inta badan saxiixayaasha kale.
Alain St.Ange, Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu u rajeynayaa Afrika iyo wixii ka dambeeya Maalinta Farxada leh ee Qaramada Midoobay 2021.
Qaramada Midoobay iyo Afrika
Maalinta Qaramada Midoobay ee loo dabaaldego 24-ka Oktoobar waxay fursad weyn u tahay dhammaanteen inaan dib u milicsano sababta ururkan loo aasaasay, laakiin sidoo kale inaan lafo-gurno baahida loo qabo in laga wada shaqeeyo horumarinta nolosheenna, badbaadada dalkeenna, iyo tan caalamka. amniga.
Sidaynu u qadarinayno in dagaalkii labaad ee aduunka ka dib ay dunidu garwaaqsatay inay lama huraan tahay in dalalka laga ilaaliyo nooc kasta oo dagaal ah oo Qaramada Midoobay (UN) la aasaasay sannadkii 1945-kii si looga hortago dagaallo mustaqbalka keeni kara. 24ka Oktoobar waa inay noo keentaa inaan fahanno qiimaha farxadda leh, nabdoon, nabdoon, iyo adduunka ugu wanaagsan gaar ahaan hadda maadaama Afrika iyo Jaaliyadaha Qaramada Midoobay ay la dagaallamayaan saamaynta weerar gardaro ah oo nolosheenna ku yeeshay masiibada Covid -19.
"Afrika waxay u baahan tahay dhammaan wiilasheeda iyo gabdhaheeda inay midoobaan maanta si ka badan sidii hore, haddii aan u soo baxno si ka adag sidii hore ka dib masiibadaas. Aan dhammaanteen isku xilqaamno sidii aan u hagaajin lahayn warshadeena dalxiiska si aan ugu anfacno dadkeenna iyo dalkeenna ”ayuu yiri Alain St.Ange.
Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu adeegsadaa Maalinta Qaramada Midoobay, 24 -ka Oktoobar 2021, si uu u xaqiijiyo sida ay uga go'an tahay inuu dalxiiska uga shaqeeyo dal kasta oo ka mid ah Qaaradda Afrika.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay doonaysaa in QM ay nadiifiso guriga
Juergen Steinmetz, gudoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka wuxuu ku celceliyay ereyadii madaxweynaha ATB laakiin wuxuu ku daray walaac xoog leh:
"Waxaan rajeynayaa in Qaramada Midoobay maalintan gaarka ah ay eegi doonto hawlaha ay qabato hay'addeeda gaarka ah, Hay'adda Dalxiiska Adduunka (UNWTO), oo ay ka walaacsan tahay dhaqdhaqaaq xarun dhexe, laakiin aad uga walaacsan sida ay hay'addani ugu guuldareysatay inay hogaamiso dalxiiska iyada oo loo marayo Dhibaatada COVID-19.
Waxay u baahan tahay hoggaan wax ku ool ah, aan khilaaf lahayn, oo daacad ah, gaar ahaan xilliyada qalalaasaha.
Qaramada Midoobay waxay ku guuldareysatay inay wax ka qabato ama xitaa aqoonsato arrimaha gudaha ee muhiimka ah (UNWTO) ee lagu wargeliyay, waana inay nadiifisaa guri si ay u ahaato mid la aamini karo, ku habboon oo waxtar u leh malaayiinta qof ee shaqeeya, waddamada ku tiirsan socdaalka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska.
Tani waa inay noqotaa danta dhammaan dalalka xubnaha ka ah iyo kuwa ka baxsan.
QM waa in ay dhistaa nidaamka cabashooyinka iyo cududda isgaadhsiinta si wax looga qabto walaacyadan oo kale.”
IMEX Champions Event Technology Iyadoo loo marayo dhacdo cusubMB